Kunzwisisa Matambudziko (Uye Kushungurudzika) kweHTML Email Dhizaini | Martech Zone
Chitatu, Kurume 23, 2022 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Asi email vapepeti vari shure zvinosuruvarisa. Heino chikonzero…
Kugadzira Maemail eHTML Kwakatonyanya Kuoma Kupfuura YeWebhusaiti
Kana kambani yako ichida yakanaka HTML email yakagadzirwa, maitiro acho akanyanya kuoma pane kuvaka peji rewebhu nekuda kwezvikonzero zvakati:
No Standards - HAPANA kuomerera kune chero webhu Mitemo ne email vatengi vanoratidza HTML email. Kutaura zvazviri yese email mutengi uye yega yega yega yega email mutengi anoita zvakasiyana. Vamwe vachakudza CSS, mafonti ekunze, uye HTML yemazuva ano. Vamwe vanokudza imwe inline styling, vanongoratidza muunganidzwa wemafonti, uye vorega zvese kunze kwezvimiro zvinofambiswa netafura. Izvo chaizvo zvinosekesa panguva ino kuti hapana ari kushanda panyaya iyi. Nekuda kweizvozvo, kugadzira matemplate anopa kune vatengi uye zvishandiso zvagara zvave bhizinesi hombe uye zvinogona kudhura zvakanyanya.
Email Client Chengetedzo -Vhiki rino chete, Apple Mail yakagadziridzwa kuvharisa mifananidzo yese mumaemail eHTML nekumisikidza isina kuiswa muemail. Iwe unogona kupa mvumo yekuvaisa email panguva, kana kugonesa marongero kudzima iyi kuseta. Pamwe chete neemail mutengi kuchengetedza marongero, kune zvakare marongero emakambani.
IT kuchengetedza -Chikwata chako cheIT chinogona kutumira mitemo yakasimba pane izvo zvinhu zvinogona kunyatso kupihwa muemail. Kana mifananidzo yako, semuenzaniso, ichibva kune imwe nzvimbo isina kucheneswa mune yekambani firewall, mifananidzo haingo ratidzike mune yako email. Dzimwe nguva, taifanira kugadzira maemail uye kugashira mifananidzo yese pane server yesangano kuitira kuti vashandi vavo vaone mifananidzo.
Email Vashandi Vanopa -Kuita kuti zvinhu zvinyanye kuoma, ivo vanogadzira email vanopa email masevhisi (kunyanyas) kuunza matambudziko pane kuvamanikidza. Nepo ivo vachisimudzira mupepeti wavo ari Izvo Zvaunoona NdoZvaunowana (WYSIWYG), zvakapesana zvinowanzova zvechokwadi nemagadzirirwo eemail. Iwe unozoona iyo email mupuratifomu yavo, ipapo iye anogamuchira email anoona ese marudzi ematambudziko ekugadzira. Makambani anowanzo sarudza asingazivi-akapfuma mupepeti pachinzvimbo cheakavharika-pasi edhita achifunga kuti imwe ine zvimwe zvinhu kupfuura imwe. Zvakapesana ichokwadi… kana iwe uchida maemail anopa zvinogara kune ese maemail vatengi, zviri nyore zvirinani nekuti zvishoma zvinogona kukanganisa.
Email Client Rendering -Kune mazana eemail vatengi, imwe neimwe ichipa HTML zvakasiyana padesktop, maapplication, nhare, uye webmail vatengi. Nepo yako nifty mameseji edhita pane yako email sevhisi sevhisi ingave ine marongero ekuisa musoro muemail yako ... iyo padding, margin, mutsara-kureba, uye font-saizi inogona kusiyana pane yega yega email mutengi. Nekuda kweizvozvo, iwe unofanirwa kunyararidza iyo HTML uye kodhi chinhu chimwe nechimwe zvakasiyana (ona muenzaniso uri pazasi) - uye kazhinji nyora kunze kweiyo email mutengi chaiwo - kuti uwane email yekupa nguva dzose. Iko hakuna akareruka mabhuroka marudzi, iwe unofanirwa kuita marongero anofambiswa netafura akaenzana nekuvaka kwewebhu makore makumi matatu apfuura. Ndosaka chero dhizaini nyowani inoda zvese kusimudzira uye mhiri-email mutengi uye kuyedza mudziyo. Zvamunoona kuinbox kwenyu zvinogona kunge zvakasiyana nezvandinoona kuinbox kwangu. Ndosaka kupa maturusi akadai Email On Acid or Litmus zvinofanirwa kuve nechokwadi chekuti zvigadziriso zvako zvitsva zvinoshanda kune ese maemail vatengi. Heino rondedzero pfupi yevakakurumbira email vatengi uye yavo yekupa injini:
Apple Mail, Outlook yeMac, Android Mail uye iOS Mail kushandiswa web kit.
Outlook 2000, 2002 uye 2003 shandisa Internet Explorer.
Outlook 2007, 2010 uye 2013 shandisa Microsoft Word (hongu, Shoko!).
Vatengi veWebmail vanoshandisa injini yebrowser yavo (semuenzaniso, Safari inoshandisa WebKit uye Chrome inoshandisa Blink).
Muenzaniso weHTML weWebhu Vs. Email
Kana iwe uchida muenzaniso unoratidza kuoma kwekugadzira mune email maringe newebhu, heino muenzaniso wakakwana kubva kuchinyorwa cheMailbakery. 19 Misiyano Yakakura Pakati Peemail neWebhu HTML:
Isu tinofanirwa kuvaka nhevedzano yematafura anosanganisira ese inline styling inodiwa kuti uise bhatani nemazvo uye nekuona kuti rinotaridzika zvakanaka kune vese email vatengi. Pachave zvakare paine inoperekedza tag kumusoro kweiyi email kuti ubatanidze makirasi.
Tinogona kushandisa rekunze shizha rine makirasi kutsanangura nyaya, kurongeka, ruvara, uye saizi yeiyo anchor tag inoratidzika sebhatani.
Maitiro ekudzivisa Email Dhizaini Nyaya
Email dhizaini nyaya dzinogona kudzivirirwa nekutevera maitiro akanaka:
Template Design -Gadzira template ine akasiyana marongero uye zvidhinha zvemukati zvinosanganisa ese masitayipi aungade kuburitsa mune yako email dhizaini. Kana isu tinoshandisa mutengi, tinogara tichivasundidzira kuti gadzira email yeramangwana - kwete chete inotevera email mushandirapamwe inotumirwa kunze. Nenzira iyo, isu tinokwanisa kugadzira zvizere, kugadzira, kuyedza, uye kuita maworkaround anodiwa pamberi vanombotumira iyo email yekutanga.
Template Testing -Kunzwisisa vatengi veemail vari kushandisa vanyoreri vako uye nekuona kuti email yako yeHTML inoyedzwa zvizere panharembozha nedesktop kwakakosha usati waisa chero template. Isu tinokwanisa kugadzira email chaiyo kubva kune photoshop dhizaini… asi kuicheka nekuiisa mutafura-inotyairwa, muchinjiko-email mutengi kwakakosha kuendesa maemail madhizaini ari akakwana uye anowirirana.
Internal Testing -Kana template yako yangogadzirwa uye nekuyedzwa, inofanirwa kutumirwa kune yemukati mbeu runyorwa mukati mesangano kuti uongorore uye ubvumire. Iwe unogona kutoda kutanga neyakaganhurirwa subset yevanhu kuti utange kuona kuti hapana firewall kana kuchengetedza nyaya dzine chekuita nekupa iyo email mukati. Kana izvi zviri kuvaka chiitiko pane nyowani email sevhisi mupi, unogona kutowana mamwe kusefa kana kuvharira nyaya dzine chekuita nekutora email yako kuinbox.
Template Versioning -Usachinje marongero ako kana madhizaini pasina kushanda pane imwe vhezheni yetemplate yako inogona kugadzirwa, kuedzwa nemazvo, uye kuiswa. Mabhizinesi mazhinji anoda madhizaini ega ega ega… asi izvo zvinoda kuti email yega yega igadziriswe, kugadzirwa, uye kuisirwa mushandirapamwe wega wega. Izvi zvinowedzera toni yenguva kune iyo email yekushambadzira maitiro mukati. Uye, iwe uri panjodzi yekusanzwisisa izvo zvinhu muemail yako zviri kuita zvakanaka pane izvo zvisiri izvo zvinhu. Consistency haingori nzira yekuita kuti maitiro ave nyore, zvakakoshawo kune maitiro evanyoreri vako.
Email Service Provider Kunze -Anenge ese e-email sevhisi anopa ane nzira yekushanda achitenderedza nyaya dzinounzwa neanovaka email. Tinogona kazhinji kuwedzera CSS yakasvibirira kuakaundi - kana kutova nechivharo chemukati chinofanirwa kuverengerwa mune yega email - kuitira kuti kambani ishandise yakavakirwa-mukati email edhita uye kuti irege kutyora dhizaini yeemail yako. Ehe, izvo zvinogona kuda kumwe kudzidziswa uye maitiro ekudzora kuendesa iwo matanho kuti ave nechokwadi chekuti anoteererwa. Kana - iwe unogona kungoda kuvandudza dhizaini yako yeemail mune mhinduro inoratidzwa kuti inoshanda kune vatengi nemidziyo, wozoiisa kumashure kune yako email sevhisi.
Email Dhizaini Mapuratifomu
Nekuti email sevhisi mapuratifomu akaita basa rakashata pakuvaka kunze nekuchengetedza muchinjiko-mutengi uye muchinjika-mudziyo unogara uchipihwa vavaki, akati wandei mapuratifomu auya kumusika. Imwe yatakashandisa zvakanyanya ndeye Stripo.
Stripo haingori muvaki weemail, ivo zvakare vane raibhurari inodarika mazana mapfumbamwe ematemplate anogona kutengwa kunze kwenyika zviri nyore. Paunenge uchinge wagadzira iyo email, unogona iyo email kune 900+ ESPs, uye email vatengi, kusanganisira Mailchimp, HubSpot, Campaign Monitor, AWeber, eSputnik, Outlook, uye Gmail. Zvakanakisa zveese matemplate eStripo anouya neemail ekupa bvunzo inosanganisirwa kuitira kuti iwe uve nechokwadi chekuti vakaedzwa uye kushanda nguva dzose kune vanopfuura makumi mana emamail vatengi.
Pinda kune iyo Stripo Edhiza Demo
Kuzivisa: Ndiri kubatanidza neyangu kushambadzira kubvunza femu anogadzira uye anotumira maemail-e-client maemail ekutungamira mhando mune chero email sevhisi. Iniwo ndiri mubatanidzwa we Stripo uye ini ndiri kushandisa yangu link mune ino chinyorwa.
Tags: blinkemail muvakiemail maklayiemail dhizainiEmail Marketingemail kupaemail service provider editoremail service providersemail template dhizainiemail template yekuongororaemail template shanduromaemail templatesemail kuedzaemail text editorhtml emailinternet explorermailbakerykushambadzira goremicrosoft wordstripoweb kitwebmailwysiwyg
Elfsight Mapurogiramu: Zviri nyore Embeddable Ecommerce, Fomu, Zvemukati, uye Zvemagariro Widgets Zvesaiti Yako.